प्रवास Archives - Page 11 of 11 - SangaloKhabar
क्वालालम्पुर–वैदेशिक राजेगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका नेपालीरु अनाहकमा त्यहाँको जेलमा बस्न बाध्य हुनुपरेको पाइएको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन बस्न्यातले मलेसियाको विभिन्न जेलमा ५ सयको हाराहारीमा नेपाली रहेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको बताए । क्वाललाम्पुरस्थित दूतबासमा सीमित सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राजदूत बस्न्यातले भने, ‘म यहाँ राजदूत भएर आउँदा ९ सय ७५ जना जेलमा हुनुहु...
दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । खाडीमा कैयौँ नेपाली कामदारको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले ज्यान लिने गरेको छ । यसमध्ये एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ, मिर्गौला बिग्रिनु । मिर्गौलाले काम गर्न छाडेर उपचारका लागि अस्पताल आउनेमध्ये खाडी मुलुकमा रोजगारी गरेर फर्किएका बढी छन् । खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीको मिर्गौला बिग्रिने कारणबारे डा. विष्णु पहारी ...
गोरखाको लाप्राक बस्ती पुनर्निर्माणका लागि अष्ट्रेलियाबाट ५० लाख सहयोग
भूकम्पबाट तहसनहस भएको गोर्खाको लाप्राक बस्ती पुनर्निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुले ६१ हजार अष्ट्रेलियन डलर (५० लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको पहिलो राष्ट्रिय उद्यमी सम्मेलनमा एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका कार्यसमिति सदस्यहरु उपस्थित भएर डा. घलेलाई ६१ हजार अष्ट्रे...
एनआरएनए युएईद्धारा दुर्घटनामा परेका जीवनको परिवारलाई सहयोग
युएई– एनआरएनए युएईले दुर्घट्ना भई घाईते भएका जीबन राना मगरको उपचारको लागि २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । युएईस्थित शारजाहमा बाटो काट्ने क्रममा गाडीले ठक्कर दिएर राना घाइते भएका थिए । रानाको मेरुदन्ड र खुट्टाको हड्डी भाचिएको छ भने डक्टरले शल्यकृया गर्न भने पनि निजको इन्सुरेन्स सुबिधा नभएकाले उपचारमा आर्थिक समस्या देखिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजका महासचिब राम तामाङको ...
माघ । महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि रकम संकलन गर्न अष्ट्रेलिया आएका धुर्मुस सुन्तलीलाई मेलबर्न र एडिलेडबाट ३७ हजार ६ सय ६८ डलर करिब ३२ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटेको छ । यसपहिले सोही कार्यका लागि अहिलेसम्म सिड्नीबाट २५ हजार डलर संकलन भइसकेको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन अन्तरगत मुसहर बस्तीका ५० घरपरिवारलाई नयाँ घर दिने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । सोही कार्यका लागि रकम संकलन गर...
मलेसिया । संसार फराकिलो छ । यो फराकिलो संसारमा धेरै प्राणिहरु छन् । त्यस मध्ये चेतनशिल छ मान्छे अनि त्यहि एक मान्छे अर्काेलाई निर्जीव बनाएर खुशी बन्न चाहन्छ । वेरोजगारको चपेटामा परेर पराई भूमीमा मजदूरी गर्ने यूवाहरु लाखौ छन् । सबै वेरोजगार भएर मात्र लाख होइनन् व्यवसाय गर्नेहरु समेत करीब ४० लाख नेपालीहरु विदेशमा छन् । मजदूरी गर्ने हिसावले सरकारी तथ्याङ्क नै नभए पनि मलेसियामा नेपाली मजदूरहरु सबै ...